Tuesday July 21, 2020 - 08:16:06 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Hoggaamiyaasha kacdoonka wadanka Maali ayaa sheegay in ay iska diideen dalab uga yimid waxa loogu yeero beesha caalamka iyo xukuumadda Maali ka jirta oo ahaa in ay kacdoonka joojiyaan ayna aqbalaa ka qeyb qaadashada xukuumad cusub oo lasoo dhisi doon
Mas'uuliyiinta hoggaaminaya mudaaharaadyada wadanka Maali ka socda ayaa markale ku celiyay in aysan aqbali doonin wax aan ka aheyn in ay iscasisho xukuumadda kajirta magaalada Bamako.
Al Imaam Max'med Diikoow oo ah hoggaamiyaha dhaq dhaqaaqa shacbiga isbedel doonka ah ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay ku sheegay in ay ganafka ku dhufteen dhammaan soo jeedimihii ahaa in ay ka laabtaan dalabaadkooda ah iscasilaadda madaxweynaha iyo R/wasaaraha wuxuuna ku celiyay in waxa kaliya ee ay doonayaan ay tahay isbedel iyo in xukuumaddu dhacdo.
Hoggaamiyaasha dhaq dhaqaaqa dibad baxyada wado waxay sheegeen in marnaba aysan aqbalayn in talada wadanka ay sii hayaan wax ay ugu yeereen faasidiin oo ay ula jeedaan dabadhilifyada faransiiska iyo saliibiyiinta kale dalka kusoo hoggaamiyay.
Ku dhowaad 15 qof ayaa ku dhintay kacdoonnada shacbiga ah ee wadanka ka socda halka 100 kale ay dhaawacyo soo gaareen, boqolaal kun oo dibd baxayaal ah ayaa taagan fagaarayaasha magaalooyinka waaweyn ee dalka Maali arrinkaas oo saameyn xun ku reebay xukuumadda dabadhilifka ah.
Shacabka Maali waxay codsanayaan in ay iscasilaan madaxda dabadhilifyada ah islamarkaana wadanka laga saaro dhammaan ciidamada shisheeye oo ay ugu horreeyaan kuwa faransiiska kadibna ay wadahadal isugu yimaadaan culimada,mujaahidiinta iyo siyaasiyiinta wadanka.
Jihaadiyiinta Alqaacidda ee maqribul islaami ayaa dhankooda horay ugu dhawaaqay in ay diyaar uyihiin wadahadal ay lagalaan cadowga balse marka hore ay shardi tahay in dhammaan saliibiyiinta iyo cumada la shaqeeya ay wadanka isaga baxaan.
Cadaadiska ugu daran wuxuu saaranyahay Ibraahiim Kiita oo ah madaxweynaha Maali ee Faransiisku kursiga ku fadhiisiyay kaasi oo marwalba warbaahinta kasoo muuqanaya isagoo gorgortan siyaasadeed ugu baaqaya shacabka kacdoonka dhigaya.